इटालीमा बिरामीको सेवा गर्दागर्दै कोरोनाविरूद्ध लडिरहेकी एक नर्सले संक्रमण देखिएपछि गरिन् देहत्याग ! – PanchKhal Online
Home/समाचार/इटालीमा बिरामीको सेवा गर्दागर्दै कोरोनाविरूद्ध लडिरहेकी एक नर्सले संक्रमण देखिएपछि गरिन् देहत्याग !
काठमाडौ, – इटालीमा एक नर्सले देहत्याग गरेकी छन्। उक्त नर्स कोरोना भाइरसको संक्रमण भएकी थिइन् । बिरामिको उपचारमा रातदिन खटिएकी ३४ वर्षीया उनले आफुलाई कोरोना देखा परेपछि यस्तो हर्कत गरेकी हुन् । इन्टेन्सिभ केयर युनिटको नेतृत्व गर्दे संक्रमितको उपचार रात दिन नभनि खटिएकी नर्सले आफु यो रोगबाट हारेको भन्दै यस्तो काम गरेकी हुन् । उनले भनेकी छिन् ।
‘कोरोना भाइरसबाट संक्रमित व्यक्तिको उपचार गर्दागर्दै म आफै संक्रमित हुन पुगें र यस्तो काम गर्ने लागेकी हुम । सु’सा’इ’ड नोटमा उनले लेखेकी छन्, ‘त्यसैले अरू धेरैको जीवन बचाउन आफ्नै जीवन अन्त्य गर्ने निर्णय लिएकी छु। उनको यो खबरले विश्व नै शोखको घडिमा पुगेको छ ।
इटालीमा कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाईंमा नर्सहरु अग्रमोर्चमा खटिएका छन् । अरुलाई बचाउनुपर्ने काममा खटिएकी नर्सले नै देहत्याग गरेपछि त्यहाँ सबै चिकित्सक र सिंगो मुलुक स्तब्ध भएको महासंघले जनाएको छ । डेली मेल लेख्छ- ती नर्समा गरिएको परीक्षणमा कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएको थियो । त्यसपछि उनी अरुलाई थप संक्रमण हुन सक्ने कुराले तनावमा थिइन् र सोही कारण देहत्यागको बाटो रोजिन् ।
सङ्क्रमणका कारण निधन हुनेको सङ्ख्या इटलीमा छ हजार ८२०, स्पेनमा तीन हजार ४३४ पुगेको छ भने चीनमा तीन हजार २८१ रहेको छ । चीनमा पछिल्ला केही हप्तादेखि नयाँ सङ्क्रमणका घटना नगन्य मात्रामा भेटिएको नयाँ सङ्क्रमितमध्ये पनि चीनबाहिरबाट आउने व्यक्तिमा बढी रहेको चीनले जनाएको छ ।
युरोपको इटाली, स्पेनसहितका देश तथा अमेरिकामा यसको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको छ । इटालीपछि कोरोना भाइरसका कारण निधन हुनेको संख्या बढी हुने देशको सूचीमा स्पेन दोस्रो स्थानमा पुगेको छ । कोरोना भाइरसका कारण इरानमा दुई हजार ७७, फ्रान्समा एक हजार १०० तथा अमेरिकामा ७८५ जनाको निधन भइसकेको छ । संक्रमित हुनेको कुल संख्याअझै पनि चीनमा धेरै छ । चीनमा ८१ हजार २१८, इटालीमा ६९ हजार १७६, अमेरिकामा ५५ हजार ८१ तथा स्पेनमा ४७ हजार ६१० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।